Raw Garcinia cambogia yakatakura powder (90045-23-1) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Garcinia cambogia mushoma upfu
Rating: SKU: 90045-23-1. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika mukuraira kweGarcinia cambogia kubuda kwehupfu (90045-23-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Garcinia cambogia kubuda pfupa inogadzirwa kubva pamuchero wetamarind uye inoshandiswa mune akati wandei ekuwedzera anotengeswa sehuremu-kurasikirwa poda yakasviba. Garcinia Cambogia chirimwa chakabudirira muIndia neAsia kwemazana emakore. Garcinia Cambogia idiki manhanga semuchero uyo urikungowana kudhonzerana nevekuMadokero vezvekudya zvinovaka muviri uye nyanzvi dzekudya mukushandisa chaiko.
Garcinia cambogia kubuda powder video
Raw Garcinia cambogia kubuda pfupa tsanangudzo
Name: Garcinia cambogia kubuda pfupa
Color: Botanicals, Powders uye Extracts, Zvimwe Zvisikwa
Raw Garcinia cambogia yakatora pfupa muhomwe kurasikirwa
Garcinia cambogia yakatakura powder (CAS 90045-23-1), HCA, Garcinia cambogia, Gambooge, Malabar Tamarind, Goraka, Brindle Berry, Brindall Berry
Raw Garcinia cambogia kubuda poda Usashandiswa
Kana ukasarudza kuti iwe uchiri kuedza kuedza kutora GC nekurasikirwa kwemazivi kana mamwe mazano, hezvino izvo zvaunoda kuziva pamusoro pemishumo yeiyo yezvinhu zvinenge zvine HCA:
(1) Zvidzidzo zvinoshandisa GC zvakashandisa zvakasiyana siyana zvemadhosi, chero kupi kubva kune imwe gramu kusvika ku2.8 gramu zuva nezuva.Typical doses is ususally between 250-1000milligrams per day.
(2) Kudzidza kwenguva yakave yakasiyana-siyana, kubva pakushandisa GC pakati pevhiki mbiri kusvika ku12 panguva imwe.
(3) Nhamba yakakwana yeHCA iye zvino haisati yazivikanwa. Hazvisi pachena kana huwandu hweHCA hwepamusoro huri kureva huwandu hwehuwandu hweHCA hwakamboshandiswa.
(4) Kunoratidzika kunge kune kuwirirana kwakakura pakati pesero reHCA uye kurasikirwa kwepanyama, kureva kuti madhesi akakwirira ane zvishoma zvishoma.
(5) Garcinia cambogia inoramba ichinyanya kushandiswa pakuwedzera muzvidzidzo zvekupa HCA, zvisinei kunze kweGC, HCA inogonawo kuwanika muzvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kuHibiscus subdariffa.
(6) Nemhaka yekuti zvidzidzo zvakawanda zvakaongorora zvigadzirwa zveGC zvakatorwa kwemavhiki masere, vatsvakurudzi vanotenda kuti izvi pakupedzisira "ndezvishoma nguva yekuongorora zvinoitika zveHCA pamuviri wechipfuva."
Kukanganisa kune rumwe rutivi rwakachengeteka, usatenga kutenga garcinia cambogia "mafomu" kana "kuwedzera kubatanidza," izvo zvinogona kukundikana kurondedzera zvimwe zvimwe zvinosanganisa kana kuti zvakaenzana mazinga eHCA. Nzira dzakawanda dzinotengeswa dzinoitwa nevagadziri vanongoshandisa zvikamu zvishoma zvezvibatanidza zvinoshandiswa kana kuti mizinga yakakwana kuchengetedza mari pasi. Nguva dzose verenga mavara uye tsvaga mazwi "pure garcinia cambogia (CAS 90045-23-1)" uye "hydroxycitric acid (kana HCA) inotora" (izvi zvinofanira kunge zvakapoteredza 50 muzana kusvika 60 muzana yemuiti). Kana iwe ukatenga mutsara uye ukaona chigadzirwa chakanyorwa pasina chiyero, icho chinogona kuva mutsvuku mutsvuku iwe usingazivi chaizvo zvauri kuwana.
Yambiro paRaw Garcinia cambogia kubuda
Kunyange zvazvo vamwe vanhu vachiti havasazovi nemigumisiro zvachose kubva pakushandisa GC, vamwe vakave nezviitiko zvakasiyana kwazvo. Heano imwe nhoroondo inovhiringidza pamusoro pekushandiswa kweGarcinia cambogia kubuda kwoupfu iyo iwe ungangodaro usina kunzwa nezvazvo: Yakapiwa kune vashoma vanorwara vanopinda muchipatara nechirwere chisina kukwana uye vachida kukurumidza kuvhara chiropa.
Chinyorwa che 2016 chakabudiswa neTransplantation Centre paMayo Clinic chinoshuma kuti mamiriyoni eAmerica anogara achishandisa mishonga yemishonga, kakawanda muhuwandu hwepiritsi, asi haazive nezvekuzara kwayo. Mishonga yakawanda yekurasikirwa kwezviremera inokonzera ngozi dzinogona kuvanzwa uye "inobatanidza ne hepatotoxicity uye kukuvadza kwechiropa."
Mumhaka ye garcinia cambogia, inogona kushandiswa zvakanyanya uye haina kunyatsogadziriswa. Vamwe vakugadziri vanokurudzira kutora maitiro akawandisa kakawanda pazuva. somuenzaniso 30 kusvika kumaminitsi e60 mushure mekudya kwega kwevhiki masere kusvika ku12 yakananga. Kunze kwekukuvara kwechiropa, mamwe garcinia cambogia madhara anogona kuitika anosanganisira:
• kuve wakazara kana kuti asina simba
• kuneta uye utsi hwehupi
• mapapiro eganda
• kuwedzera kwekubata zvipfunho / kupera mumuviri
• kuoma muromo uye kufema kwakaipa
• zvinetso zvekudya zvakadai sokunyunyuta, kunetseka kudya kana kubuda
Chimwe chinhu chingafungisisa pamusoro peGC ndezere rurefu rwekugona kwaro kurapwa / kushandisa zvinodhaka. Vanhu vazhinji havafaniri kuvhara garcinia cambogia nekuda kwekuti ingakanganisa sei mimwe mishonga, pamuviri, nheyo dzehutano, shuga yeropa nezvimwe. Garcinia cambogia inogona kuyanana ne:
• pamuviri nekuyamwisa
• huripo hutachiona kana hutsva kukuvara
• mishonga inotorwa kuti itaradze mweya uye chirwere
• chirwere cheshuga uye insulin
• simbi inowedzera (kazhinji inotorwa nevanhu vane chirwere chekushaya ropa)
• mishonga inorwadza
• mishonga inoshandiswa kugadzirisa zvirwere zvepfungwa zvakadai sekuzvidya mwoyo uye kuora mwoyo
• mishonga yemasitini iyo yakasarudzwa necholesterol
• ropa rinopisa zvinodhaka (kufanana nefarfarin)
Garcinia cambogia yakatora pfumbu inogadzirwa kubva mumuchero wemaramarind uye inoshandiswa muzvidimbu zvakasiyana-siyana zvinotengeswa semutoro-kurasikirwa poda yakasviba.
Garcinia cambogia (GC) chikafu chiduku, chimiro chakafanana nemakungu chinokura muSouth-Asia neIndia. Chinokosha chinoshandiswa pakugadzirisa chinowanika mu rind ye garcinia cambogia inonzi hydroxycitric acid (HCA), iyo imwe tsvakurudzo inoratidza kuti inogona kubatsira vamwe vanhu kuderedza uremu.
Garcinia cambogia mazano, tsvakurudzo dzekutsvaga uye kushaya kurasikirwa kwehupupuriro zvakasanganiswa kutaura zvishoma. Kubva kure zvakanyanya kufanirwa kubatsirwa kwekushandisa garcinia cambogia ndiko kukwanisa kwayo kuwedzera kuora kurasikirwa. Zvimwe zvinotaurwa zvinowanzoitwa nezvegarcinia cambogia zvinosanganisira:
• kurasikirwa nechido kana kuderera kwechido chokudya kudarika nguva
• kuderedza zvido zvezvokudya zvisina kunaka, zvakadai sehutachiva hunodhaka
• kunyanya kufara (kusanganisira kunzwa kufara, kuwedzera simba uye kuderera)
• kuwedzerwa simba nekufungisisa
• kusimbiswa kwehuga yehuga
• kuvandudzwa kwemafupa
• kuderedza marwadzo akabatanidzwa
• yakagadziridzwa nehushutera yeklesterol
• Chido chakasimba chokushanda
Zvizhinji zvezvataurwa pamusoro apa hazvina kubatsirwa nedzidzo dzezvesayenzi, asi vamwe vane. Ngatimbokurukurai zvinobatsira zve garcinia cambogia izvo chaizvoizvo zvine zvimwe zvakakodzera uye zvinoratidzika kuti zvinoshanda neimwe nzira.
Dzimwe tsvakurudzo dzakaona kuti garcinia cambogia inogona, chaizvoizvo, kukwanisa kubatsira nechepasi mashoma ekurasikirwa kwemafuta, pamwe nezvimwe zvinetso zvehutano zvinotaurwa pamusoro, kunyange zvazvo kubudirira kwayo kusingawanzosimba kana kusagadzikana. Somuenzaniso, kutsvakurudza kunoratidza kuti HCA inoshanda nekuvhara imwe enzyme inonzi adenosine triphosphate-citrate-lyase, iyo inobatsira pakuumbwa kwamafuta masero. Asi kuenzanisa kuenzanisa GC nemigumisiro yekugadzirisa yakawana kuti inogona kungoita kuwedzera kurasikirwa kwemazivi nemapiro maviri chete paavhareji.
Izvi zvakawanikwa ndezvakataurwa nevatsvakurudzi mu Journal of Obesity mu2011. Apo vaifananidza vanhu avo vakatora Garcinia cambogia kubuda kwehupfu kune avo vasina, mutsauko wekurema wakanga uri muduku zvikuru (paavhareji anenge anenge mapaundi maviri). Uyezve, zvakanga zvisingakwanisi kugumisa kuti GC yaive yakatarisa zvakakwana pamapiro akawedzerwa.
Meta-analysis yakagadziriswa migumisiro kubva kumigwagwa yakasiyana-siyana ye12 inosanganisira GC uye yakaratidza mutsara muduku, unoverengeka unokosha mukurasikirwa kwekureruka kunoshandiswa kushandiswa kwezvigadzirwa zveGarcinia cambogia zvine HCA zvishoma pane kushandisa nzvimbobho. Zvisinei, kutsvakurudza kwakawanawo kuti dzimwe dzidzo dzakaratidza kudengenyeka kwemigumisiro ("zviitiko zvepachivi zvinotambudza") zvakapetwa kaviri mumapoka eHCA akaenzaniswa ne placebo.
Migumisiro yakasiyana-siyana yekurasikirwa kwekutsvaga zvidzidzo inosanganisira GC yakave yakavhenganiswa. Chimwe chekudzidza mune meta-analysis chakarondedzera kuderera kukuru kwemafuta akawanda muboka reHCA rakaenzaniswa ne placebo, zvidzidzo zviviri zvakarondedzera kuderera kukuru mumafisi e-visceral / subcutaneous mafuta / mazana mafuta munzvimbo yeHCA yakaenzaniswa ne placebo, asi dzimwe dzidzo mbiri haana kuwana mutsauko mukuru zvachose pakati peHCA ne placebo. Chidzidzo chakabudiswa mu Journal of the American Medical Association chakawana kuti GC yakashandiswa kwemavhiki e12 (1,500 milligrams muyero) "yakakundikana kubudisa hukuru hunorema kurasikirwa uye kurasikirwa kwehuwandu huwandu kupfuura izvo zvakaonekwa ne placebo."
Mhedziso ye meta-analysis pamusoro pegarcinia cambogia? Vatsvakurudzi vakapfupisa zvitsva zvavo nekureva kuti "hukuru hwemigumisiro yacho shoma, uye kliniki inobatsira haina chokwadi. Miedzo yeramangwana inofanira kunge yakaoma uye yakanyatsorondedzerwa. "Chinonyanya kukosha ndechokuti kana uri kutambura kuti uremerwe uremu, GC inenge isingagoni kuva mhinduro, maererano nekuongorora uye kutungamirirwa zvidzidzo.
2). Kunyorera Appetite
Zvidzidzo zvakare zvakaratidza kuti zvinogona kuitika kuti HCA inowanikwa mu garcinia cambogia inogona kubatsira kuderedza chido cheumwe munhu nokuwedzera kubudiswa kweeurotransmitter serotonin, iyo inobatanidza nekudzikama uye kufara manzwiro - uye naizvozvo, dzimwe nguva kuda kudya kuderera, zvishuvo zvishoma uye kuderera kuderedza kudya kwekunyaradza . Zvidzidzo zvezvipfuwo zvinoratidza kuti zvingabatsirawo kuwedzera mari yekushandisa mari.
Ramba uri mupfungwa, zvisinei, izvi hazvisizvo kune vanhu vose, uye pane zvimwe, zvingangova zvisingabatsiri nzira dzekutarisira zviri nani kudya kwako uye kukurudzira kushandiswa kweprotonin (sekudya kudya kwakaringana nemaprotein foods uye marashi ane utano nguva dzose zuva rose).
Pane humwe hutsigiro hwegarcinia cambogia kukwanisa kuvandudza cholesterol mazinga uye kuderedza zvakanyanya triglycerides. Inogonawo kukwanisa kubvisa HDL "yakanaka" cholesterol. Hazvina ngozi kune ani zvake anototanga kushandisa mishonga inobata cholesterol, zvisinei, nemigumisiro yayo haifaniri kunge yakavimbika kana yakasimba.
Zvidzidzo zvakawana kuti GC haina "yakakosha pamiganhu yeanthropometric, REE, triglycerides kana glucose" asi inogona kuva nemigumisiro shoma pakuderedza cholesterol. Funga mupfungwa kuti kunewo zvakawanda zvezvimwe zvepanyama zvekuvandudza cholesterol mazinga, kusanganisira kushandisa uye kudya zvimwe zvekudya zvinokonzerwa ne-high-fiber foods semaggies, nuts, mbeu uye nyemba.
4). Yakasimbiswa Ropa Shuga
Pakupedzisira, zvakadini nemigumisiro yeCG pamashuga eropa? Humwe humwe huripo huripo hunoratidza kuti garcinia cambogia inogona kubatsira kudzora shuga yeropa nokuvandudza kuti masero anotora glucose (shuga) inoshandiswa sei simba. Imwe nzira iyo inogona kuvandudza kuora kurasika ndeyokudzivirira kwepancreatic alpha amylase enzyme, kuchinja mumukati alpha glucosidase uye kuchinja mu fatty acid synthesis. Izvi zvinogona kukwanisa kushandura kuti magidhaidhirati anoshandiswa sei.
Izvi zvingangobatsira muviri wako kupindura kune insulin zviri nani, kunyange zvinogona kukonzera njodzi yekuve nehutachiwana hwehuga hwepamusoro kune vamwe vanhu, zvakare. Kana iwe une nhoroondo yehuga yeropa inopinda, iwe uri prediabetic, chirwere cheshuga kana kutora mishonga inoshandura zvinokonzera insulin, GC inogona kuita kuti shuga yako yeropa inodonha dambudziko riri pasi. Kunyange zvazvo izvi zvisingaoneki zvichiitika kune wese anotora GC, chimwe chinhu chingafanira kufunga uye chimwe chinhu chokukurukura nachiremba wako.
Garcinia cambogia kubuda poda Raw Powder (CAS 90045-23-1)
Raw Garcinia cambogia kubudisa pfupa Kudzingisa
Nzira yekutenga Garcinia cambogia kubudisa pfu (CAS 90045-23-1) kubva kuAASraw